सगरमाथा क्षेत्रमा अलपत्र १९ पर्यटकको उद्धार
‘मेरो रगतले रहस्य पत्ता लगाउनेछ’ : कोरोना भाइरसबाट निको भएकी युवती
कोरोना भाइरस आतङ्क : के गर्न सक्छ स्थानीय निकाय ?
प्रधानमन्त्रीको सूचना-प्रविधि सल्लाहकार हटाउन नेता शेखरको माग
घरधनीले दानी बनिदिनु पर्ने, सरकारचाहिँ के गर्ने ?
घटना र विचार, न्युज डेस्क V 1 week ago March 26, 2020
लुक्लासहित माथिल्लो क्षेत्रमा अलपत्र परेका १९ पर्यटकको उद्धार गरिएको छ । आकस्मिक रुपमा नेपाल ‘लग डाउन’ भएपछि सगरमाथा क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको आज उद्धार गरी काठमाडौँ लगिएको हो ।
आज उद्धार गरिएका मध्ये एक नेपाली र १८ विदेशी रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीकुमारी शाहीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार १४ फ्रान्सेली पर्यटक तारा एयरबाट काठमाडौँ गएका छन् भने डाइनेस्टिक एयरको हेलिकप्टरमार्फत दुई र सिम्रीक एयरको हेलिकप्टरमार्फत तीन जनाको उद्धार गरिएको हो ।
मङ्गलबार र बुधबार दुई दिनमा १० बिरामी पर्यटकको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यले बताइन् । अहिले पनि लुक्लामा करिब १५० को हाराहारीमा पर्यटक रहेको अनुमान गरिएको छ । उद्धार गरिएका फ्रान्सेली नागरिकलाई आफ्नो देश फर्काउन फ्रान्सबाट चार्टर विमान नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । फ्रेन्च दूतावासकै पहलमा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका फ्रान्सेली नागरिकलाई काठमाडौँ लगिएको छ ।
ट्रम्पको दोस्रोपटक कोरोना परीक्षण, अमेरिकामा ६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
सीमाबन्दीका कारण हजारौँले दुःख पाएकोमा एम्नेस्टीद्वारा ध्यानाकर्षण